Garlic ingenye imbiza ethandwa kakhulu, ngaphandle izinto zalo zokwelapha abeve bethandeka. Khulisa lokhu isiko akunzima engadini yakho engadini. Abantu abaningi bayazibuza lapho aphonswe garlic ebusika? isikhathi ibhokisi lohlu olwehlisiwe off esifundeni ngasinye kuyoba ukuhluka. ukutshala ngendlela efanele ngesikhathi esifanele garlic ebusika ingenye izici ezibaluleke kakhulu yenala. Kuyadingeka ukuba ngokucophelela ukukhethwa imibhede bese imbewu ukuzifinyelela.
Lapho ukutshala garlic ebusika
garlic itshalwe kufanele kube amasonto ambalwa ngaphambi kokuqala kubanda, ngokuvamile phakathi noma ekupheleni kuka-October, nakuba kwezinye izindawo eningizimu yezwe kufanele selihlehliselwa uNovemba. Ngokuvamile etshalwe garlic a ngamasentimitha amahlanu ukujula, kodwa ezindaweni ezibandayo ucingo kungcono ukusebenzisa esangweni lalihlehliswa. Ukuze wenze lokhu, namazinyo garlic ezibekwa ukujula pyatnadtsatisantimetrovoy, lokhu kuzosiza ngcono ukuhambisa frost futhi ngokuqinile ukumila.
Lapho ukutshala garlic ebusika, tshela sezulu uqobo. Ngokuvamile akhethiwe isikhathi ngaphambi ukuqala Kulindeleke amakhaza. Kodwa imibhede izitshalo ingalungiswa kusengaphambili. Garlic elihle kunawo kuyoba inhlabathi okuxekethile, ezifana loam noma loam sandy. It is hhayi Kunconywa ukuba imbewu plant ezindaweni ukuthi abavezwe izikhukhula entwasahlobo eduze komhlaba. Garlic futhi ayikwazi watshala ensimini, lapho lo nyaka laqanjwa humus. Lokhu kuzobandakanya ukukhishwa ukukhula okusezingeni eliphezulu futhi zizinde bamahlamvu, futhi inhloko uqobo uyoba okuxekethile kabana fungal izifo. Garlic flower embhedeni is best ise empumalanga kuya entshonalanga, isiqondiso kanye ubude, futhi qiniseka lezemihlaba kumele uzovulelwa futhi libalele. On isivuno esihle enempilo ithinta esikhathini lapho aphonswe garlic ebusika, kodwa futhi efanele hhayi kuphela ukulungiselela umhlabathi. Isayithi kufanele uqale umbe ngaso 20-30 cm ukujula, bese ukhetha yonke ukhula. Wabe esethula egcekeni umquba noma umquba ezifana potassium phosphate.
Ilungiselela garlic zokutshala
The best ukutshala ezibonakalayo akuyona nje into garlic isikhule endaweni. Ukuze kokwehla ngaphandle ukukhetha ukulimala enkulu ekhanda nezifo. Khona-ke ahlukanisa ikhanda garlic on the amazinyo, okuzoba imbewu isivuno olandelayo. Ngokuba nokuvimbela izifo ezihlukahlukene fungal Kunconywa zokutshala ukumelana amahora in isixazululo potassium permanganate noma ithusi sulfate.
Indlela ukutshala ebusika garlic wukuthi akusiyo ezibandayo sezulu ebusika? Imigodi, okuyinto abatshalwé amazinyo, qiniseka ukugcwalisa umquba, kanti kwezinye izindawo nge nokhahlo sezulu mulching ngamasentimitha engaze ibe yishumi. Ukuze ivumelane semboza ngabo izithombo zezihlahla ngezinto ezahlukene kuyinto sonwele nesihlahla sonwele amagatsha, eyomile bawa amahlamvu.
Okuphoqelekile kokwehla uma aphonswe garlic ebusika, sinake izitshalo okhule engadini ngonyaka odlule, isibonelo, is hhayi Kunconywa ezindaweni lapho ekhula anyanisi. Umhlabathi ezindaweni ezifana Akukho lutho olusele-potassium izinqolobane, nesweli ungayeki isivuno oyifunayo. Umhlabathi evumayo kakhulu garlic emva izitshalo ezifana utamatisi, ukhukhamba, ama-eggplant, pepper. Lapho aphonswe garlic ebusika, ngaphambi kokutshala ngempela ukufa phansi usebenzisa izinkuni umlotha noma amalungiselelo akhethekile.
Imibhede Beautiful - indlela yokwenza kwabo uzilungise futhi iphathwa
Kokudubula ububanzi 120 mm nodaka. Nosimende labadubuli range